के सिक्छन् नानीहरू ?- विविधा - कान्तिपुर समाचार
भट्टराई मन्टेश्वरी शिक्षिका हुन् ।
श्रावण ३०, २०७५ प्रतिमा भट्टराई
काठमाडौँ — दस वर्षअघि राजधानीको एउटा प्राथमिक विद्यालयमा पढाउन जाँदा मलाई साना नानीहरूसित कस्तो व्यवहार गर्ने थाहै थिएन । बालबालिकाका आनीबानी र सिकाइ पनि म बुझ्दैनथेँ । शिक्षक हुनुलाई एउटा सामान्य जागिरका रूपमा मात्र लिएको थिएँ । पूर्वतयारी विना पढाउन थालेँ ।
अहिले लाग्छ, साना नानीलाई अक्षर चिनाउनु सामान्य जागिरमात्र हैन, आफै एउटा विश्वविद्यालय भर्ना हुनुजस्तै हो । शिक्षक साना नानीहरूका निकै नजिकका साथी हुन् । ती सबै नातेदारभन्दा नजिक हुन्छन् । त्यस्तै व्यवहार गर्छन् । मलाई थुप्रै नानीले झुक्किएरै सही, ‘मम्मी’ भन्थे । त्यसो भन्दा एउटा शिक्षकलाई झन् धेरै जिम्मेवारीे महसुस हुँदोरहेछ ।
उनीहरू आफ्नै आमासँंग जस्तैगरी शिक्षकलाई मनका सबै कुरा खोल्छन् । घरमा खाएको परिकार, लगाएका कपडा, रमाइला क्षण, नरमाइलो पल र खेलेका कुरासमेत सुनाउँछन् । बुबाआमाको भनाभन, घरायसी विवाद र झै–झगडासमेत शिक्षकलाई बताउँछन् । नानीहरूका निर्दोष आँखामा हेर्दा लाग्छ, उनीहरू घरको तनाव पनि शिक्षकले सुल्झाइदिए हुन्थ्यो ।
अभिभावकको सधैं गुनासो हुन्छ, आफ्नो बच्चा घरमा पढ्दैन । होमवर्क गर्दैन । टीभी हेर्छ, खेल्न घर बाहिर दगुर्छ । भनेको मान्दैन । अटेरी गर्छ । खाना खाँदैन । बिहान उठ्ने बित्तिकै ट्वाइलेट जाँदैन जस्ता गुनासा सुनाउँछन् । उनीहरूलाई लाग्छ, छोराछोरी आफ्नै नियन्त्रणमा छैनन् । शिक्षकसित डराउँछन् । मानौं, शिक्षकले हप्काइदिए ती सबै बानीमा सुधार ल्याउनेछन् । शिक्षक बालबालिकाका प्रौढ साथी हुन् । तैपनि अभिभावकको अपेक्षा सुन्दा लाग्छ, नानीहरूको दायित्व अभिभावकभन्दा अधिक शिक्षककै हो ।
एउटा नानी विद्यालयमा बिहान साढे ९ बजेदेखि दिउँसो साढे ३/४ बजेसम्म मात्र रहन्छ । बाँकी समय ऊ आफ्नै अभिभावकसंँग बस्छ । तर अभिभावकहरू घरमा समेत आफ्नो बच्चा स्कुलकै र शिक्षककै नियन्त्रणमा रहोस् भन्ने चाहन्छन् । यतिसम्म चाहन्छन् कि शिक्षकको नाम लिनासाथ बच्चा तर्सिएर पढ्न थालोस् । कुनै बेला थियो, साना नानीहरूले भनेको नमाने ‘ऊ गुजी आयो, भूत आयो’ भनेर डर देखाइन्थ्यो । पछि ‘पुलिस बोलाइदिन्छु’ भनेर हाउगुजी देखाउन थालियो । अचेल ‘म्यामलाई भन्दिन्छु’ भन्ने चलन आएको छ । यस्तो पार्न खोजिएको छ, मानौं सर–म्यामको काम नानीहरूलाई डर देखाउन हो । उनीहरूसित साना नानीहरू हायल–कायल छन् । उनीहरूको सत्मार्गको सम्पूर्ण तालाचाबी शिक्षकसित मात्र छ ।
हामी विद्यालयलाई बालमैत्री बनाउन सधैं कोसिस गरिरहन्छौं । कक्षा कोठामा लठ्ठी राख्नु अब असभ्यता मात्र हैन, दण्डनीय भइसकेको छ । हाँस्दै, खेल्दै सिक्ने अभ्यास भइरहेका छन् । तर अधिकांश अभिभावक आफ्ना बच्चालाई पिटेर तह लगाउन शिक्षकलाई सुझाव दिइरहेका हुन्थे । ‘पिटनुस्, गाली गर्नुस्, तर्साइदिनुस्’ भन्ने अभिभावक दिनहुँजसो विद्यालयमा भटिन्थे ।
बालबालिकाको रुचि, चाहना र भावनालाई पढालेखा अभिभावकले पनि खासै महत्त्व दिएको पाइँदैन । उनीहरूको निस्छल मनसंँग रमाउन आफ्नै बुबाआमाले जानेका छैनन् । तपाई जतिसुकै तनावमा हुनुस्, बालबालिकासंँग आधा घन्टा मन खोलेर समय बिताउनुभयो भने तनावमुक्त हुनुहुनेछ । तपाईले कहिल्यै आफ्ना नानीसित मन खोलेर कुरा गर्नुभएको छ ? दिनभर के–के भयो, सोध्नुभएको छ ? आज के सिक्यौ बाबु/नानी भनेर सोध्नुभएको छ ? मलाई लाग्छ, तपाई–हामी हरेक दिन आधा/एक घन्टा ‘क्वालिटी टाइम’ दियौं भने आफ्नै नानीका समस्या र गुनासा बोकेर शिक्षककहाँ धाइरहनै पर्दैन ।
हामीले बिर्सिरहेको एउटा ठूलो सत्य के हो भने अभिभावक नै उसको पहिलो र सबैभन्दा ठूलो शिक्षक हो । सबैभन्दा नजिकको साथी हो । आफ्नै घर सबैभन्दा ठूलो पाठशाला हो । पाठ्य पुस्तकका ज्ञान त विस्तारै सिक्दै जाने तपसिलका विषय हुन् ।
बालबालिकालाई खुसी हुन कुनै ठूलो बहाना चाहिँदैन । आज म्यामले राम्रो लेख्यौ भनेर कापीमा ‘बटर फ्लाइ’ बनाइदिनुभो, कार्टुन बनाइदिनुभो भनेर प्रफुल्ल हुन्छन् । हाम्री ६ वर्षकी छोरी छन् । उनी बाबासित घर फर्किन पाउँदा सबैभन्दा धेरै खुसी हुन्छिन् । बाबा उनलाई लिन सधंै आउन भ्याउनुहुन्न । तर जुन दिन बाबा लिन आउँछु भन्नुहुन्छ, त्यो दिन छोरीले स्कुल पुग्नासाथ आफ्ना साथीहरूलाई सुनाइसकेकी हुन्छिन् । फुर्की–फुर्की म्यामलाई पनि भन्छिन्, ‘आज मेरो बाबा लिन आउनुहुन्छ ।’
जन्मदिनमा उस्तै उमंग । लाग्छ, साना नानीहरूका लागि आफ्नो ‘बर्थ डे’भन्दा अर्काे ठूलो कुनै चाडपर्व छैन । घरमा केक काट्नुमा छुट्टै खुसी छ, त्योभन्दा धेरै मिठाइ लिएर स्कुल आउनुमा छ । विदाको दिन ‘बर्थ डे’ पर्‍यो भने अर्को दिन भए पनि आफ्ना साथीसंँग रमाएरै छाड्छन् । सायद आफ्नै हातले मिठाइ बाँड्नुको मजा हुँदो हो । उनीहरूको अनुहारमा खुसी छचल्किइरहेको हुन्छ । त्यो खुसीमा साथ दिँदै साथीहरू जब ‘ह्याप्पी बर्थ डे टु यु’ भन्छ, थोरै लज्जा, थोरै उमंगका साथ ‘थ्याङ्क यु’ भन्दाको अनुभूति सायद अरु कुनै कुरासंँग तुलना हुँदैन होला ।
अभिभावकलाई सताउने अर्को विषय हो, ‘होमवर्क’ । कतिसम्म भने उनीहरू मन्टेश्वरी कक्षाका प्ले ग्रुपका बच्चालाई पनि ‘होमवर्क’ चाहन्छन् । कापीमा लेख्नु वा सार्नुमात्र ‘होमवर्क’ हो भन्ने अर्को बुझाइ छ । कापीमा लेख्न दिनेमात्र होइन, पढ्नु, बुझ्नु र थाह पाउनु पनि होमवर्क हो । अभिभावक चाहन्छन, आफ्नो नानी होमवर्क गरेर बसिरहोस् । खेल्न, घुम्न र टिभी हेर्नुभन्दा होमवर्क गरेरै समय बिताओस् । शिक्षकले यति धेरै होमवर्क दिउन् कि छोराछोरीले अरु कुरा सोच्नसमेत नभ्याउन् । शिक्षकसंँग डराएर अतिरिक्त गतिविधिमा उनीहरूले ध्यानै नदिउन् । एउटा सत्य के हो भने विद्यालय भर्ना गर्दैमा, शुल्क तिर्दैमा अभिभावकको दायित्व पूरा हुँदैन । आफ्नो नानीको आनीबानी, रुचि पनि थाह पाउनुपर्छ । उसको खुसीका लागि सबैभन्दा ठूलो कुरा समय दिनुपर्छ ।
विद्यालयले नानीहरूलाई सामाजिकीकरण गरिरहेको हुन्छ । त्यहाँ कुनै भेदभाव हुँदैन । जाति, धर्म र समुदायको रेखा सायद ठूलाले आफ्ना स्वार्थका लागि कोरेका हुन्छन् । उनीहरूका लागि सबै समान छन् । जाति, धर्म र लिंगबारे आफ्ना नानीलाई गलत अभ्यास नसिकाए मात्र पनि एकै दशकमा देशमा व्यावहारिक रूपमै समानताको स्थिति बन्थ्यो होला ।
भट्टराई मन्टेश्वरी शिक्षिका हुन्।
प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७५ ०८:३२
फेवा अतिक्रमण ४४ वर्षदेखि
२०१७ मा बनाइएको बाँध २०३१ पुस १७ मा फुटेर तालको माथिल्लो भागमा पानी सुक्यो । त्यही बेलादेखि व्यक्तिले तालको जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गर्न थाले
श्रावण ३०, २०७५ लालप्रसाद शर्मा
पोखरा — पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यले २०६४ मा फेवाताल किनारको १० मिटरभित्रै पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट बनाउन जग हाले । तत्कालीन पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले त्यसलाई भत्काइदियो । त्यसपछि शाक्यले मुख्य संरचनालाई केही पर (६५ मिटर मापदण्ड बाहिर) सारे । तर, विभिन्न शक्तिकेन्द्र धाएर उनले सानातिना संरचना भने तालकै जग्गा मिचेर बनाए ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा रिसोर्टले करिब २२ आना जग्गा अतिक्रमण गरी भौतिक संरचना बनाएको उल्लेख छ । सर्वोच्चको वैशाख १२ को आदेशपछि प्रमुख नापी अधिकृत नारायण रेग्मीको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनअनुसार सरकारी सार्वजनिक जग्गामा वाटर फ्रन्टले संरचना बनाएको हो ।
फेवातालको ६५ मिटर वरपर कुनै संरचना बनाउन नपाइने भए पनि वाटर फ्रन्टले बनाएको र जग्गासमेत मिचिएको प्रतिवेदनमा छ । तालको संरक्षणका लागि जिविस कास्कीको १५ औं जिल्ला परिषद् र नगर विकास समितिको २०६४ साउन २८ को बोर्ड बैठकले ६५ मिटर क्षेत्रमा कुनै पनि संरचना बनाउन नपाइने निर्णय गरेको थियो ।
वाटर फ्रन्ट बनाइएको स्थानमा पहिला खहरे खोला बग्थ्यो । खोला आसपासको ढाव क्षेत्र सार्वजनिक जग्गा हो र हालको रिसोर्टभन्दा तलबाट एउटा मूलबाटो थियो । २०३२ सालदेखि खोला र जग्गा व्यक्तिले दर्ता गर्न थाले । त्यसरी दर्ता भएको जग्गा २०६१/६२ मा शाक्यले किने । भीम गुरुङ, मंगले पोडे, गणेशभक्त शर्मा, यदुनाथ, चन्द्रकान्त पहारीलगायतबाट ८९६६.३१ वर्गमिटर क्षेत्रफलको जग्गा रिसोर्ट प्रालिको नाममा किनेको मालपोत कास्कीको अभिलेखमा छ ।
‘पहुँचकै भरमा जानीजानी शाक्यले यहाँको जग्गा किनेका हुन्,’ पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछानेले भने, ‘तर जतिसुकै पहुँच पुर्‍याएर चलखेल गरे पनि एक दिन सत्यको जित र असत्यको हार हुने रहेछ भन्ने पुष्टि भएको छ ।’ लामिछाने अध्यक्ष भएका बेला शाक्यले तालसँग जोडेर बनाएको भवन भत्काइएको थियो ।
भारतको सहयोगमा २०१७ मा फेवातालमा बाँध बनाइएको थियो । बाँध २०३१ पुस १७ मा फुटेर तालको माथिल्लो भागमा पानी सुक्न पुग्यो । त्यहीबेला व्यक्तिले तालको जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गर्न थाले । तत्कालीन ९ नम्बर नापी गोश्वाराले स्थानीयले ल्याएको २०२२, ०२६, ०२७, ०३४, ०३५ सालको रसिद देखाएर जग्गा नापी गरेको मालपोत कार्यालयको अभिलेखमा छ । मालपोत ऐन २०३४ लागू भएपछि २०३८ मा पनि केही जग्गा नापी भएको देखिन्छ ।
२०३३/३४ सालमा सर्पट नापी हुँदा तालको १६९२–६–०–१ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको सरकारले २०६८ मा गठन गरेको फेवातालको जग्गा छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा छ । प्रतिवेदनअनुसार उक्त बाँध फुटेका बेला करिब एक हजार व्यक्तिले तालको जग्गा व्यक्तिगत बनाएका थिए । नगर विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष लामिछानेको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो । लामिछाने समितिले उक्त जग्गा दर्ता खारेजका लागि सरकारसँग सिफारिस गरेको छ । तर सरकारले यसतर्फ कुनै पहल गरेको छैन । योबाहेक प्रतिवेदनमा फेवातालको विगत र अहिलेको अवस्थाबारे स्पष्ट गरिएको छ ।
वर्षा, बाढीपहिरो, भूक्षयलगायतबाट तालमा बर्सेनि ढुंगा, गिटी बालुवा (गेग्रान) आउँछ । यसले ताल पुरिँदै गएको छ । त्यो पुरिएको जग्गा व्यक्तिले दर्ता गर्न थाले । उक्त जग्गा पहुँचवालाले किने र संरचना बनाउन थाले । यसले ताल अतिक्रमण बढ्दै गयो । ‘करिब २ सय संरचना ६५ मिटरभित्रै बनेका छन्,’ पोखरा महानगरपालिकाको फेवाताल संरक्षण आयोजनाका प्रमुख इन्जिनियर महेन्द्र गोदारले भने, ‘नाम चलेका पर्यटन व्यवसायीले पनि बनाएर भाडामा दिएका छन् ।’ फेवातालको डयामसाइडदेखि चंखपुरसम्मको करिब १० किलोमिटर क्षेत्र किनार कुनै न कुनै रूपले मानवीय अतिक्रमणमा परेको जानकार बताउँछन् ।
डा. जगदीशलाल वैद्यले खपौदीस्थित फेवातालको किनारबाट ६५ मिटरभित्रै घर बनाए । तत्कालीन पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले २०६५ सालमा त्यसलाई भत्कायो । वैद्यले तत्काल मर्मत गरेको घर अहिले पनि छ । अर्का व्यवसायी पीयूषबहादुर अमात्यले पनि फेवाताल किनारमा जग्गा किनेका छन् । उनको जग्गाको केही प्रतिशत भूभाग ६५ मिटरभित्रै पर्ने पनि विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । नापी कर्मचारीबाट अवैध दर्ता गरेको र सोही जग्गा किनबेच भएको जानकार बताउँछन् । पञ्चायतकालमा रत्नमन्दिरदेखि फिस्टेल लजसम्म तालछेउमै बनाइयो ।
पर्यटन बोर्डको कार्यालय र प्रहरीका केही संरचना पनि नजिकै बनाइएको थियो । पछिल्लो समय व्यावसायिक उद्देश्यसाथ व्यक्तिगत रूपमा संरचना बनाउने होडबाजी नै चलेको हो । ४० को दशकदेखि ताल किनारमा संरचना बनाउन सुरु भएकोमा २०४६ पछि बढ्यो । जनप्रतिनिधि नभएको १५ वर्षको अवधिमा र २०७१/७२ मा यस्ता संरचना निर्माणले तीव्रता पाएको गोदार बताउँछन् । तालसँगै जोडिएर घरहरू बने पनि सरकारी निकायले रोक्न सकेनन् । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले मापदण्डविपरीत संरचना बनाउन नदिने र बनाएमा कुनै पनि बेला भत्काउन सक्ने अधिकार दिए पनि तत्कालीन पोखरा उपमहानगर र अन्य गाविसले चासो नदिँदा समस्या विकराल बनेको हो । कानुन कार्यान्वयन नगरेकाले अतिक्रमण बढेको वरिष्ठ अधिवक्ता विश्व घिमिरे बताउँछन् ।
पर्यटन व्यवसायी गोविन्दराज पहारीले पहुँचकै आधारमा ताल किनारमा संरचना बनाइएको बताए । मापदण्डविपरीत बनेका संरचनालाई पानी, बिजुलीलगायत सरकारी सुविधा सहजै उपलब्ध भएर पनि समस्या बल्झिएको उनको भनाइ छ । २०४१ माघ १९ मा मालपोत कास्कीले तत्कालीन गण्डकी अञ्चलाधीशलाई पत्र लेखेर पानीको सतहभित्र परेको जग्गाबारे जानकारी गराएको थियो । त्यसमा २०३२ मा नापी भएको र २०३९ मा नापी स्थगित भएको उल्लेख छ । सरकारले २०४१ मा तत्कालीन पश्चिमाञ्चल सिँचाइ निर्देशकको संयोजकत्वमा छानबिन समितिसमेत गठन गरेको थियो । तर त्यसको प्रतिवेदन कहींकतै छैन ।
पोखराको भौतिक विकास गुरुयोजना २०३२ को फेवाताल संरक्षण निर्देशिकामा तालको किनारलाई ग्रिनबेल्ट बनाउने निर्णय भएको थियो । तर यो थाहा पाउँदापाउँदै पनि स्थानीयले संरचना बनाएका हुन । तालसम्बन्धी अध्ययन गरिएका प्रतिवेदन (लामिछाने समिति, जाइका, आईयूसीएन) लगायतले प्राकृतिक, मानवीय अतिक्रमण र प्रदूषण रोक्न हरित क्षेत्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । यस्ता प्रतिवेदन हुँदाहुँदै पनि शाक्यलगायतले संरचना बनाएको लामिछानेले बताए ।
‘पहुँचवालाले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि राष्ट्रिय सम्पदा मिच्ने काम गरेका छन्,’ उनले भने, ‘तर मिच्न हुँदैन/पाइँदैन भन्ने नजिर स्थापित भएको छ । अब राज्यका निकायले मापदण्डविपरीत संरचना बनाउन दिनु हुँदैन । ताल संरक्षणमा लाग्नुपर्छ ।’ कास्की मालपोतका प्रमुख मालपोत अधिकृत ज्ञानराज पाण्डेले पुरानो नापनक्साका आधारमा पुन: नापजाँच नगरी वास्तविक तालको जग्गा नआउने बताए ।
प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७५ ०८:२५